» चर्चित द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गी र ग्यानेन्द्र शाहीको भयो जम्का भेट ! राजेन्द्रले ग्यानेन्द्रलाइ पागल भनेपछी भयो यस्तो बबाल ! (हेर्नुहोस भिडियो) चर्चित द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गी र ग्यानेन्द्र शाहीको भयो जम्का भेट ! राजेन्द्रले ग्यानेन्द्रलाइ पागल भनेपछी भयो यस्तो बबाल ! (हेर्नुहोस भिडियो) – हाम्रो खबर
चर्चित द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गी र ग्यानेन्द्र शाहीको भयो जम्का भेट ! राजेन्द्रले ग्यानेन्द्रलाइ पागल भनेपछी भयो यस्तो बबाल ! (हेर्नुहोस भिडियो)
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा छ । चन्दा मागेर रंगशाला सम्भब छैन ! सेयर किन नखोलेको ? तारा बराल ले कहिले सम्म झुट्को प्रमाण लेर हिड्ने ? – पुन्य गौतम ।
“गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशला एक नेपाली निर्माधिन बहुउपयोगी रङ्गशाला हो। यो रङ्गशाला धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले भरतपुर महानगरपालिका भित्र निर्माण गरिरहेको छ ।”
“रंगशाला उपर सबैले सबै खालका बिचारहरु राख्दै आइरहेका छन् । धुर्मुसको यही अभियानलाई लिएर पुन्य गौतमले बिचार राखेका छन ।
उक्त भिडियो हेरौं